Hindiya Oo Wali Ku Gardaro Ku Raadinaysa Sheekha Caanka Ah Ee Zaki – somalilandtoday.com
(SLT-Hindiya)Waxaa bartiisa facebook ku tixan dad gaaraya 16 milyan; twitter-kiisa 150,000, wuxuuna jeediyay ku dhawaad 4,000 oo muxaadarooyin ah kuna saabsan diinta Islaamka dunida oo dhan.
Hayeeshe, Zaki Abdulkarem Naik, oo ah daaci iyo seynisyahan Muslim Hindiyan ah, waxaa hadda ku raad-joogta oo dooneysa dowladda Hindiya.
Zaki Naik oo ah shaqsiga ugu caansan Muslimiinta ku nool bar-qaareedka Hindiya waa bartilmaameedka koobaad.
Taniyo markii uu dhacay weerarkii maqaaxi ku taalla caasimadda Dhaka ee Bangladesh lagu qaaday, daacigan waxaa lagu suntay inuu si hoose uga danbeeyey falkaas.